ငါ့ကို မနမ်းပါနဲ့ စိုးသူဇာလှိုင် | မိုးစက်မှော်
ငါ့ကို မနမ်းပါနဲ့ စိုးသူဇာလှိုင်
Filed under: ခံစားမှုသက်သက်, အချစ် —5Comments	20/12/2009
နေ၀ ဒေဿန္တ ဘီသနံ
ဆရာမက တိုင်ပေး၊ တပည့်တွေက လိုက်ဆို။ စတုတ္ထတန်းအတန်းတင်စာမေးပွဲကြီးအပြီး အတန်းပိုင်ဆရာမက တပည့်တစ်ယောက်အိမ်မှာ ကျန်တဲ့တပည့်တွေကို ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုသင်ခန်းစာကို သင်ပေးနေတာပါ။ ဒီနေ့တော့ ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ်ထဲက မေတ္တာသုတ်ရဲ့ ၁၂ ပိုဒ်ရှိတာမှာ ပထမ ၆ ပိုဒ်ရအောင်ဆိုပြီး ဆရာမက ချပေး၊ တပည့်တွေက လိုက်ဆို နေကြတယ်လေ။
လေးတန်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဆိုတော့ ၉ နှစ်၊ ၁၀ နှစ်ဝန်းကျင် အရွယ်လေးတွေပေါ့။ ဆရာမကလည်း ရှိလှမှ အသက် အစိတ် သုံးဆယ်အရွယ်ပေါ့။ ဆရာမ အပျိုကြီးဆိုတော့ နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်မှာ အအားမနေဘဲ ကိုယ့်တပည့်လေးတွေ ယဉ်ကျေးလိမ္မာစေဖို့ ကုသိုလ်စိတ်ထားနဲ့ စေတနာထား သင်ပေးတာဖြစ်နိုင်သလို၊ ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး ခိုင်းထားလို့ဖြစ်ဖြစ်၊ ရည်းစားမရှိသေးလို့ အပြင်တွေဘာတွေလည်းသွားခွင့် လျှောက်လည်ခွင့် မရှိသေးတာနဲ့ တပည့်တွေနဲ့ရှိနေတာ အပျင်းပြေတယ်ဆိုပြီး သင်ပေးနေတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တပည့်တွေက ငါးယောက် အင်း… ခြောက်ယောက်ရှိတယ်၊ ယောက်ျားလေး ၂ ယောက်၊ မိန်းကလေး ၄ ယောက်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေထဲမှာ သင်တန်းပေးခွင့် ပြုတဲ့အိမ်က ကောင်မလေးက ချစ်စရာလေး။ အသားဖြူဖြူလေး ဆံပင်ဖြောင့်လေးနဲ့၊ နဖူးပေါ်ကျနေတဲ့ ဆံစလေးတွေကို မျက်ခုံးပေါ်မရောက်တရောက်မှာ တိတိကျကျညှပ်ထားတယ်။ မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်း ပါးဖောင်းဖောင်း ပါးအို့လေးပေါ်မှာ ရှင်မတောင်သနပ်ခါးလေးလိမ်းပြီး လေးကွက်ကြားပါးကွက်လေး ကွက်ထားတယ်။ မေတ္တာသုတ်ကို ဆရာမပြီးရင် အကျယ်ဆုံးလိုက်အော်ဆိုနေတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်က ခုနသနပ်ခါးလိမ်းထားတဲ့ ကောင်မလေးနဲ့ အနီးဆုံးရောက်အောင် မသိမသာရော သိသိသာသာရော ကပ်ထိုင်ပြီး၊ ကောင်မလေးပါးက သနပ်ခါးနံ့ကို ခိုးရှုနေတယ်။ ကလေးအရွယ်တွေမို့ ဘာစိတ်မှမရှိသေးဘူးလို့ထင်ရပေမယ့် အဖိုအမဓာတ်သဘောနဲ့ ဆွဲငင်အားကိုတော့ လူကြီးတွေအနေနဲ့ အဲဒီအချိန်ကစပြီး သတိပြုဖို့ကောင်းနေပါပြီ။
အိမ်ရှင်ကောင်မလေးနာမည်က စိုးသူဇာလှိုင်ဖြစ်ပြီး၊ မဟုတ်တရုတ်စပြီးလုပ်တတ်နေပြီဖြစ်တဲ့ ကောင်လေးနာမည်ကတော့ မျိုးဆက်မောင်တဲ့။ အိမ်နာမည် မောင်မောင်ပေါ့လေ။
ကျောင်းမှာလည်း သူငယ်ချင်းဖြစ်၊ တစ်ရပ်ကွက်တည်းနေ သူငယ်ချင်းလည်းဖြစ်တော့ သူတို့တွေ ရင်းနှီးကြတယ်လေ။ ခက်တာက သူတို့အားလုံးက ကျောင်းမှာ အတော်ဆုံးစံပြကျောင်းသားတွေဖြစ်တော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အပြိုင်အဆိုင်သိပ်များတယ်။ အထူးသဖြင့် မိဘတွေက ကိုယ့်သားသမီးကို တော်စေချင်တော့ တွန်းကြတာပေါ့လေ။ တွန်းတဲ့အခါမှာလည်း မိန်းကလေးတွေက မိဘစကားကို ပိုနားထောင်ပြီး ကြိုးစားကြတာပေါ့။ မောင်မောင်ကတော့ သာမန်ပဲကြိုးစားတာ တွေ့တာပဲ။ ဒါပေမဲ့ အတန်းထဲမှာတော့ မောင်မောင်က ထိပ်ကချည်းရှိတာများတယ်။
တစ်ခုတော့ရှိတာက မောင်မောင့်အမေက ထက်တယ်၊ မောင်မောင့်ကို ကျောင်းလောက်တင်မဟုတ်ဘူး၊ မြို့နယ်အဆင့် တိုင်းအဆင့်လောက်အထိကို အဆင့်အတန်းမြင့်မြင့်နဲ့ အောင်မြင်ပေါက်မြောက်စေချင်တယ်။ ခက်တာက ကလေးက တော်သာတော်တယ်၊ ငပျင်းလေးဖြစ်နေတယ်။ ဒီတော့ အမေက တွန်းလိုက်၊ သားက အိပဲ့အိပဲ့နဲ့ မရွေ့ချင်ရွေ့ချင်နဲ့ ရွေ့လိုက်ပေါ့လေ။ နေဦး နောက်မှ သူတို့သားအမိအကြောင်း တစ်ပုဒ်ရေးလို့ရသေးတယ်။ မောင်မောင်က အတွေးသမားလေး၊ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက သိပ်တွေးတယ်၊ စိတ်ကူးယဉ်တယ်။ လူကြီးမိဘတွေ ပြောဆိုဆုံးမရင် သူတို့ဘာလို့ နာ့ကို ဒီလိုပြောသလဲလို့ တွေးတတ်တယ်။ ပြီးတော့မှ သူမှားပြီ၊ လူကြီးတွေပြောတာမှန်တယ်ဆိုပြီး မျက်ရည်တွေ တွေတွေကျပြီး ငိုတတ်တယ်။ စိတ်ခံစားမှုအားကြီးတဲ့ ကလေးပေါ့လေ။
ဒါနဲ့ မောင်မောင်ဟာ စိုးသူဇာလှိုင်ဆိုတဲ့ကလေးမလေးကို မျက်စိကျခဲ့တယ်ဆိုပါတော့။ မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းလေးရယ်၊ အရောင်ထွက်အောင် လက်နေတဲ့ ချစ်စရာ မျက်လုံးပြူးပြူးလေးရယ်၊ အမေ့ပါးဆိုရင် တအားနမ်းဖြစ်လိုက်မှာလို့ မောင်မောင်တွေးနေတဲ့ အသားဖြူဝင်းတဲ့ သနပ်ခါးတင်ထားတဲ့ ပါးပြင်လေးရယ်၊ ဆံစကို နဖူးပေါ်မှာ တိတိကျကျလေးညှပ်ထားပြီး သန်စွမ်းနက်မှောင်တဲ့ ဆံပင်ကို နောက်ကစုချည်သိမ်းဆည်းထားတဲ့ ငယ်ငယ်ကလေးက ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့၊ အဖြူရောင်ဘလောက်စ်အင်္ကျီလေးနဲ့ ခါးကနေအောက်ကိုကားသွားတဲ့ စကပ်မဟုတ်ဘဲ တိုက်စကပ်လိုခေါ်တဲ့ အခုခေတ် ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း အမျိုးသမီးတွေဝတ်တဲ့ စကပ်မျိုး အစိမ်းရောင်လေးဝတ်ထားတဲ့ စိုးသူဇာလှိုင်ဟာ မောင်မောင်ဆိုတဲ့ ၁၀ နှစ်သားလေးရင်ထဲ တစ်ခါတခါ ရောက်နေတတ်တယ်။
အချိန်တွေဟာ အကုန်မြန်တယ်။ နောက်ထပ် ၁၀ နှစ်ကြာသွားတယ်။ မောင်မောင်ဟာ အသက် ၂၀ တွင်းကို ရောက်လာပြီ။ မူလတန်းကျောင်းတုန်းက ခင်မင်ခဲ့ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတချို့လည်း ဆုံးပါးကုန်ပြီ။ ဒါပေမဲ့ ပျင်းတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မောင်မောင့်ရဲ့ သနပ်ခါးနဲ့ကောင်မလေးက ၁၀ နှစ်အကြာမှာ ပိုတောင် ချစ်ဖို့ ကောင်းလာတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းကလိုတော့ ပါးဖောင်းဖောင်းလေး မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့၊ ခန္ဓာကိုယ် ပိန်ပိန်ပါးပါးနဲ့ မျက်နှာသွယ်သွယ်ဖြစ်ပြီး ခပ်ကျစ်ကျစ် ကောင်မလေးတစ်ယောက်လို တွေ့လာရတယ်။
ငယ်ငယ်ကတော့(၁၀ နှစ်အရွယ်လောက်က) မောင်မောင်ကတောင် သိပ်မထွားဘဲ သူငယ်ချင်းမတွေက ပိုပြီးထွားကျိုင်းသလိုမျိုး ဖြစ်ခဲ့တယ်။ မိန်းကလေးမို့ စောစောဖွံ့သလားတော့ မသိပါဘူး။ အခုတော့ မောင်မောင်က အရပ်ကြီးကလန်ကလားနဲ့ဖြစ်နေချိန်မှာ သူ့သူငယ်ချင်းမတွေက သူ့အောက်ခေါင်းတစ်လုံးနိမ့်နေကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သနပ်ခါးမလေးဟာ အခုဆို တရုတ်မင်းသမီးဂေါင်းလီလိုလို လှနေတော့ မြန်မာဂေါင်းလီလို့တောင် ခေါ်ရမယ်ထင်တယ်လို့ မောင်မောင်က တွေးတယ်။
မောင်မောင်က ငယ်ငယ်ကတော့ စိုးသူဇာလှိုင်လေးကို သဘောကျခဲ့ပေမယ့် အခုကျတော့ သူက အထာနည်းနည်းကိုင်ချင်ပုံရတယ်၊ သူ့ကိုယ်သူလည်း အထင်နည်းနည်းကြီးတာပါမှာပေါ့လေ။
မောင်မောင်ဟာ သူ့ကိုယ်သူ ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင်လို့ သဘောထားနေခဲ့တယ်၊ နှင်းဆီခိုင်ဟာ ဘယ်လောက်ပဲ ရေထောင်ထားထား၊ ဘားပလက်စ်ကျွေးကျွေး ခဏနေကြွေမှာပဲဆိုတာကို မောင်မောင် သိပုံမရတာလား၊ မသိချင်ယောင်ဆောင်တာလား ဆိုတာကိုတော့ သူကိုယ်တိုင်မှ သိနိုင်မှာပဲဗျာ။
အတွေ့အကြုံမရှိဘဲ တရားဟောချင်ပုံရတဲ့ မောင်မောင့်ကို ထောင်ထောင် ထောင်ထောင်နဲ့ ရပ်ကွက်ထဲ ပြန်တွေ့ရချိန်မှာ သဘောကျနေခဲ့တာကတော့ သနပ်ခါးမလေးပါပဲ။ သနပ်ခါးမလေးက အခုတော့ မိတ်ကပ်တွေ သုံးတတ်နေပြီလေ။ မိတ်ကပ်ကို ပါးပါးလိမ်း၊ နှုတ်ခမ်းနီကို အရောင်ဖျော့ဖျော့ဆိုး၊ သူ့ကိုယ်တိုင်ကလည်း သူ့ကိုယ်လုံးခပ်ကျစ်ကျစ်နဲ့လိုက်ဖက်အောင် ၀တ်စားတတ်တဲ့ စိုးသူဇာလှိုင်ဟာ ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်။
စိတ်ခံစားမှုအားကောင်းတဲ့မောင်မောင်က ကျောင်းပြီးတဲ့ အဲဒီ ၂၀ အရွယ်မှာပဲ ကံတရားဖေးမလို့ သတင်းထောက်လေးဖြစ်လာခဲ့တယ်။ သူ့သူငယ်ချင်းကောင်မလေး ကလည်း နာမည်ကြီးဈေးကွက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးအမှုဆောင်(တကယ်တော့ဝန်ထမ်းပါပဲလေ)ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ အရည်အချင်းအသီးသီး ရှိသူတွေမို့ လပိုင်းအတွင်းမှာပဲ သူတို့အသီးသီးရဲ့အလုပ်ဌာနတွေမှာ နေရာရလာကြတယ်။
မောင်မောင်တို့သတင်းစာနဲ့ အဲဒီကြော်ငြာလုပ်ငန်းလည်းလုပ်တဲ့ စိုးသူဇာလှိုင်တို့ကုမ္ပဏီဟာ ကူးလူးဆက်ဆံမှုတွေရှိတော့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် မကြာခဏ ဆိုသလို ဆုံဖြစ်ကြတယ်။ ဆုံဖြစ်တိုင်းလည်း စိုးသူဇာလှိုင်က ရင်းရင်းနှီးနှီး ခင်ခင်မင်မင် ဖော်ဖော်ရွေရွေရှိသလောက် မောင်မောင်က ကြောင်အမ်းအမ်း ရွံ့တွန့်တွန့်ဖြစ်နေတတ်တယ်။
စိုးသူဇာလှိုင်ကိုမြင်ရင် မောင်မောင်က လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်က သနပ်ခါးမလေးကို လွမ်းတတ်တယ်။ သနပ်ခါးနံ့ခိုးရှုဖူးတာလေးကို အမှတ်ရရင် သူ့ဟာသူပြုံးတတ် တယ်။ မဟုတ်တာလုပ်ထားတဲ့သူဟာ ကိုယ်မဟုတ်တာလုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စ၊ လုပ်ခဲ့တဲ့လူအပေါ် အမြဲစိုးရိမ် ကြောက်လန့် နောင်တရနေတတ်တယ်။ မောင်မောင်ကတော့ စိုးသူဇာလှိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး မဟုတ်တာလုပ်ခဲ့ဖူးတာကိုတော့ နောင်တရပုံ၊ စိုးရွံ့ပုံ တယ်မတွေ့ရလှဘူး။
စိုးသူဇာလှိုင်ဟာ မောင်မောင်ကြောင်တောင်တောင်၊ အူတူတူလုပ်ပုံတွေကို ကြာရှည်သည်းမခံပါဘူး။ သူ့ကို မောင်မောင်ငယ်ငယ်က စိတ်ထဲကြိတ်ခဲ သဘောကျဖူး တာကိုလည်း မိန်းကလေးပီပီ သိခဲ့ပုံပေါ်ပါတယ်။ အခုလူကြီးဖြစ်လာတော့လည်း လူတွေကို ကျအောင်ပြောဆိုလုပ်ကိုင်နေရသူဆိုတော့ လူ့အကြောလူ့သဘော နပ်ပုံရပါတယ်။
“မောင်မောင်၊ အလုပ်တယ်များပါလားကွ၊ နာ့ကိုတောင် စကားကောင်းကောင်းမပြောနိုင်ပါလား“
“ဘာ မဟုတ်ရမှာလဲ၊ နင် အူကြောင်ကြောင်လုပ်နေတာ သိတယ်၊ နင့်မှာ ရည်းစားရှိလို့လား၊ ဘယ်တစ်ယောက်လဲ နာ့ကို ပြစမ်း“
“ဟာ့ ဘာလို့ရှိရမှာလဲ၊ ဘာတွေလာပြောနေတာလဲ၊ ကိုယ့်သတင်းကိုယ်လိုက်နေရတာနဲ့တင် အားတာမဟုတ်ဘူး၊ နင်တို့လို ပဲလေးများပြီး ဘဲကြီးတွေ ကြွေအောင်လုပ်ပြီး အလှလေးပြင်လို့ အေးအေးလူလူလုပ်ရတာမဟုတ်ဘူး၊ ပြေးရလွှားရ အဆူအဟောက်ခံရ အဆဲအဆိုခံရ အကြမ်းပတမ်းလုပ်ရတာဟဲ့၊ နားလည်း လည်မှာ မဟုတ်ပါဘူး“
“အောင်မာ အောင်မာ၊ ဘာလို့နားမလည်ရမှာလဲ မောင်မောင်ရာ၊ ဖုန်းလေးဆက်၊ ရီကော်ဒါလေးထုတ် တောင်မေးမြောက်မေး မေး၊ ပြန်ကူးပြီး ရေးရတာများ၊ နာတို့လို ချက်(ဂျက်)နဲ့လက်နဲ့ သူများလက်ခံလာအောင် အာပေါက်အောင်ပြောရတာမျိုးလည်း မဟုတ်ပါဘူး၊ တီထွင်တွေးပြီး စိတ်မ၀င် ၀င်စားအောင် ပြောဆိုရတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ နင့်လိုဆို နင့်နှစ်ယောက်စာ နာတစ်ယောက်တည်း လုပ်နိုင်တယ်“
စိုးသူဇာလှိုင်လေးက စွာတေးလေးဖြစ်လာပါရောလား၊ သူ့အလုပ်ကပဲ သူ့ကို ဒီလိုစွာလာအောင် သင်ပေးလိုက်သလား၊ မိန်းကလေးတွေ ကြီးလာရင် ဒီလိုပဲ စကားများလာတတ်သလားလို့ မောင်မောင်တွေးတယ်။ အဲဒီလိုသွက်သွက်လက်လက်လေး သူ့ကိုပြန်ပြောတာကို မောင်မောင်က သဘောကျတယ်။ သူ့မှာ သတင်းထောက်သာလုပ်နေတာ၊ စိတ်ခံစားမှုက အားကောင်းလွန်းသူမို့ ခံစားမှုမပါအောင် တော်တော်ကြီးကို ထိန်းနေရသူ၊ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရာမှာလည်း သိပ်မမြန်သူဖြစ်နေတတ်တယ်။ စိုးသူဇာလှိုင်သာ သတင်းထောက်လုပ်ရင် နာမည်ကြီးအမျိုးသမီးသတင်းထောက်ဖြစ်သွားမှာလို့တောင် မောင်မောင်က တွေးလိုက်သေးတယ်။ ဒီလိုသုံးလေးခါလောက် ရင်းရင်းနှီးနှီးစကားပြောလာတော့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် သိပ်ပြီး ရှိန်းတိန်းဖိန်းတိန်းဖြစ်မနေတော့၊ အမှန်တော့ နဂိုကတည်းက စိုးသူဇာလှိုင်က ဖြစ်မနေဘူး၊ ကိုယ်တော်ချောကသာ ပဲတွေများပြီး ထွက်ထွက်ပြေးနေတာ။
အဲ ခုနောက်ပိုင်းတွေ့ဆုံမှုတွေမှာတော့ ဟိုတစ်ယောက်ခမျာ ဖောက်လိုက်ရတဲ့ရေမြောင်း၊ ဒီဘက်က လူက ရေမစီးရုံတင်မကဘူး၊ ဖောက်ထားတဲ့ရေမြောင်းထဲ မြောင်းနှုတ်ခမ်း ဟိုဘက်ဒီဘက်တင်ထားတဲ့ မြေစိုင်မြေခဲတွေကို ပြန်တွန်းချဖို့လုပ်နေတော့ ဒီနေ့ခေတ်ရဲ့ သမီးပျိုလေးက ရဲတယ်လေ။ ဇာတ်က လန်းတယ်။
“ဟ ဟ၊ ဘာလုပ်တာလဲ“
“ငါ့ကို ဒီလို မနမ်းပါနဲ့ စိုးသူဇာလှိုင်“
မောင်မောင်က မိစိုးလို့တောင် မခေါ်နိုင်တော့၊ အတည်အတန့်ပြောနေတာကြီးကိုး။ ဟိုတစ်ယောက်ကလည်း မခံ။
“အောင်မာ ငပြူးကပဲ ပြဲရသေးတယ်၊ မောင်မောင် နင်ဘာဖြစ်နေတာလဲ“
“ဟ၊ ဘယ်သူက ပြူးတာလဲ၊ ဘယ်သူက ပြဲတာလဲ၊ ငါ့ကို ဒီလို မနမ်းနဲ့လို့ပြောတာ“
မောင်မောင်တို့နှစ်ယောက် ရုံးနားက စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာ စားတာ သုံးလေးခါရှိနေပြီ။ အဲဒီဆိုင်က ငါးပိထမင်းကြော်အစပ်နဲ့ ၀က်လက်မြေအိုးပေါင်းဆိုတာ ကောင်းတယ်။ ဆိုင်က လမ်းမကနေ မြေအောက်ထပ်လိုဖြစ်နေတဲ့နေရာလေးကို လှေကားကနေဆင်းပြီးမှ စားရတယ်။ လေအေးစက်ဖွင့်ထားပြီး စတစ်ကာကပ်ထားတဲ့မှန်တံခါးတွေကြောင့် အလင်းရောင်ကောင်းကောင်းမရပေမယ့် အတွင်းမှာလည်း မီးကိုလင်းနေအောင် မထွန်းဘဲ မှိန်ပြပြပဲ ထွန်းထားတာမို့ အတွဲတချို့ထိုင်တတ်ကြတယ်။
ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားက နည်းနည်းလွတ်လပ်တဲ့သဘောလည်း ရှိတာမို့ အလစ်မှာ စိုးသူဇာလှိုင်က မောင်မောင့်ကို ဘေးချင်းယှဉ်ထိုင်ရက်ကနေ အလစ်နမ်းလိုက်တာပါပဲ။ မမျှော်လင့်တဲ့အချိန်မှာ တိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတဲ့ သူရဲကောင်းလို ဓားကို ရုတ်ချည်းဆွဲထုတ်လိုက်ပေမယ့် တိုက်ခိုက်သူက အလစ်တိုက်ခိုက်ပြီး ဘယ်ရောက်သွားမှန်း မသိအောင် မြန်ဆန်လှတာမို့ ရှက်ရှက်နဲ့ပဲ အနီးအနားက ၀ါးရုံကိုပဲ ခုတ်လိုက်ရသလို မောင်မောင့်မှာလည်း အူကြောင်ကြောင်လုပ်ခဲ့သမျှ စိုးသူဇာလှိုင်နဲ့ကျမှ ဒုက္ခနဲ့လှလှတွေ့ပြီဆိုပြီး ပြောမိပြောရာပြောလိုက်တာပါ။ ဒါပေမယ့် သူကလည်း သတင်းထောက်ဆိုတော့ သိပ်အတုံးကြီးတော့ မဖြစ်တန်ရာ။
“နာ့ကို ပါးစပ်နဲ့ နမ်းတာ မကြိုက်ဘူး“
“ပါးစပ်က ကြုံရာတွေ ၀ါးနေစားနေတာ ညစ်ပတ်တယ်၊ နမ်းတယ်ဆိုတာ နှာခေါင်းနဲ့ နမ်းရတာ မဟုတ်ဘူးလားဟဲ့၊ နမ်းတယ်ရှိုက်တယ်ဆိုတာ အငွေ့အနံ့ရှုတာပဲဟဲ့၊ ရေမွှေးနံ့၊ သနပ်ခါးနံ့ မွှေးတယ်၊ နမ်းတယ်၊ နမ်းရှိုက်တယ်၊ ဒီလိုပဲပေါ့၊ ဘယ်နှယ့် ပါးစပ်ကြီးနဲ့ လုပ်လို့ဖြစ်မလား“
“အမေ့ကဆို နှာခေါင်းနဲ့ပဲ နာ့ကို နမ်းတယ်၊ နာလည်း အမေ့ပါးကို နှာခေါင်းနဲ့ နမ်းတာပဲလေ၊ နင့်ကျမှ….၊ နင် ဟောလီးဝုဒ်ကားတွေကြည့်ပြီး အရမ်းလုပ်လို့ဖြစ်မလား“
မောင်မောင်က ပြောချင်ရာတွေပြောပြီး စိုးသူဇာလှိုင်ကို အနမ်းလက်ချာရိုက်နေတယ်။ တောက်လျှောက်သွက်လာတဲ့ ကောင်မလေးခမျာ မောင်မောင့်ကိုကြည့်ပြီး မှင်သက်မိနေတယ်။ နာကြိုက်မဲ့ကောင်တော့ တကယ့်ကြောင်တောင်တောင်ကောင်ထဲက ဖြစ်နေပါပေါ့လားဆိုပြီး တွေးနေသလား၊ မိန်းကလေးတန်မဲ့ သူ့ကိုလည်း နမ်းရသေး၊ လူပါးလည်း ၀ခံရသေးဆိုပြီး ကြိတ်ပြီးဆဲရေး စိတ်ဆိုးနေတာလားတော့ မသိပါဘူး။
“အောင်မာ၊ သတင်းထောက်အစုတ်ပလုပ် လျှောက်ပြီးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေပြောမနေနဲ့၊ နမ်းတယ်ဆိုတာ ချစ်ခင်ကြောင်းပြတာ၊ ကိုယ်ချစ်တယ်ဆိုတာကို ထုတ်ဖော်ပြတာ၊ ဘယ်လိုနမ်းနမ်း အရေးမကြီးဘူး။ နှာခေါင်းနဲ့ နမ်းတယ်ဆိုတာ ကုလားတွေမှ နမ်းတာမဟုတ်ဘူးလား။ ကုလားအကြောင်း နှာခေါင်းသက်သေ လို့တောင် ဆိုကြတယ်မဟုတ်လား“
“မဟုတ်ဘူး၊ နာကြည့်ရတဲ့ ကုလားကားတွေမှာတော့ အမေ့နဖူးကို သားကနမ်းရင် ပါးစပ်နဲ့နမ်းတာပဲ။ အနမ်းကို ကြည့်တာနဲ့ အချစ်နဲ့နမ်းတာလား၊ ရမ္မက်နဲ့ နမ်းတာလားဆိုတာ ခွဲလို့ရပါတယ်“
“မောင်မောင်၊ အရူး သောက်ကြီးသောက်ကျယ် လျှောက်မပြောနဲ့“
စိုးသူဇာလှိုင် ရှက်ရမ်းရမ်းလေပြီ။ မောင်မောင်ကို အလွန်စိတ်ဆိုးလေပြီ။ သူ့လက်ကိုင်အိတ်ကိုယူ၍ ဆိုင်ပြင်ထွက်ဖို့လုပ်သည်။
မောင်မောင် ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ ဘာလုပ်သည် ထင်ပါသလဲ။ ဇာတ်က အလွမ်းဇာတ်ဖြစ်နေပါသည်။ ဘုန်းကြီးဖြစ်မဲ့သူက ဆိုင်ထဲကနေ စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးနဲ့ ထွက်ခွာတော့မဲ့ဆဲဆဲ မျက်ရည်ဝဲ၀ဲကောင်မလေးကို စကားတစ်ခွန်း ပြောသည်။
“နောက်ကို ဒီလို မနမ်းပါနဲ့ စိုးသူဇာလှိုင်“တဲ့။
၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်၊ နံနက် ၀၀း၁၀ နာရီ။
5 Comments: hlaing
23/12/2009 at 3:07 pm	ဟားဟား တော်တော်ရယ်ရတယ်။
ဇာတ်လေးက ကောင်းပါတယ်။ စွဲဆောင်မှုလည်း ရှိတယ်။
ယောက်ျားလေးက စကားပြောတဲ့နေရာပါ “ဟဲ့” လို့ မသုံးရင် ပိုကောင်းမယ်။ တော်တော်လေး ကောင်းပါတယ်။
Reply	aye myat
29/12/2009 at 2:56 pm	အင်း……
Reply	ma pa
14/01/2010 at 11:57 am	dreaming as much as u can but pls think myanmar ladies’ morale and sence of shame in this.asaauthor, u can dream and write according to ur wish bcs dream is FOC. don’t angry!!!
18/02/2010 at 6:48 am	ခက်ပါ့….ခက်ပါ့။ ကိုမျိုးစာတွေ ဖတ်ရင်းနဲ့..
ဂေးဖတ်လိုက်ရ၊ ဂျော့ကလူးနီဖတ်လိုက်ရ၊ နမ်းခံရတာ ဖတ်လိုက်တာ…ဘာပြောရမယ်မှန်းတောင် မသိတော့ဘူး။
31/08/2010 at 10:00 am	ဒီစာဖတ်ပြီးတော့ငိုရမလို ရီရမလို